Uvavanyo lomsebenzi -Shenzhen PhiliFast Electron Limited
Ngokwesiqhelo, emva kokuba ibhodi yesekethe ihlanganisiwe kwaye igqityiwe i-AOI kunye nokuhlolwa kokuvela, sihlala sicebisa umthengi ukuba abonelele ngendlela yovavanyo olupheleleyo lokwenza uvavanyo lokugqibela olusebenzayo kwibhodi egqityiweyo ngaphambi kokupakisha kunye nokuthumela yinkampani yethu.
I-PHILIFAST ineqela lobuchule lovavanyo lwe-PCB (FCT). Uvavanyo olusebenzayo lusenza ukuba sifumane kwaye silungise ukungaphumeleli kwecandelo, ukusilela kwendibano okanye iingxaki zokuyila ngaphambi kokuthunyelwa, kwaye senze ukusombulula ingxaki ngokufanelekileyo kunye nokugcinwa.
Kungale ndlela kuphela apho umgangatho weemveliso zabathengi unokuqinisekiswa nge-100%. Uvavanyo olusebenzayo ikakhulu kukuthintela iingxaki zebandla, kubandakanya iisekethe ezimfutshane, iisekethe ezivulekileyo, izinto ezingekhoyo okanye iinxalenye ezingafakwanga kakuhle.